Showing २१-३० of ३९४ items.
‘दंगल गर्ल’ जायरा डिप्रेशनमा : आत्महत्या गर्ने सोच आउँने खुलासा
फिल्म ‘दंगल’ तथा सिक्रेट सुपरस्टार जस्ता सुपरहिट फिल्मबाट चर्चामा आएकी जायरा वसीमले उनको बाल्यकालदेखिको बिमारी बारेमा खुलासा गरेकी छिन् । उनले आफू बाल्यकाल देखिनै डिप्रेशनबाट पीडित रहेको कुरा लेखेकी छिन् । उनले डिप्रेशनकै कारण आत्महत्या गर्ने सोच पनि आउने गरेको तर परिवारमा उनलाई यति सानो उमेरमा डिप्रेशन हुँदैन भनेर सम्झाउने गरेको पनि बताइन् । १७ वर्षीया जायराले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बिमारीका विषयमा लेखेकी छिन्, ‘अन्ततः म यो कुराको बारेमा बताउँदैछु कि म लामो समयदेखि डिप्रेशन र एन्जाइटीबाट पीडित छु । मलाई यस्तो बिमारी भएको चार वर्ष भयो’ । साथै उनले बिमारीकै कारण दिनमा पाँच वटा एन्टी–डिप्रेशनक
सोनमले विवाहलगत्तै श्रीमानलाई घुच्चुकमा समातेर घिसारिन्
मंगलबार सोनम कपुर र आनन्द अहुजाको विवाह भयो । यी दुईको विवाह थुप्रै कारणले चर्चामा रहेपनि उनीहरुको केकले तहल्कै मच्चायो । वास्तवमा, यो केकमा दुलहा–दुलही बनाइएको थियो जहाँ बास्केटबल कोर्ट पनि थियो । केकमा बनेको आकृतीका अनुसार बेहुलीले बेहुलाको कठालो समातेर घिसारिरहेकी छिन् । यो आकृतीलाई सोनम र आनन्दसँग जोडिएको छ किनभने आनन्दलाई बास्केटबल खेल्न निकै मनपर्छ ।
बेहुली बन्दै सोनम कपुर
बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर आज आफ्ना प्रेमी आनन्द आहुदासँग विवाह वन्धनमा बाँधिँदैछिन् । यतिबेला कपुर निवासमा विवाहको तामझाम सुरु भइसकेको छ । सोनम कपुर प्रख्या अभिनेता अनिल कपुरकी छोरी पनि हुन् । त्यसैले भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो बिहेलाई निकै महत्व दिएका छन् । बिहेका पलपलका अपडेटहरु आइरहेका छन् ।
प्रकाशित मितिः बैशाख २५, २०७५
१,११५ पटक पढिएको
बलिउडकी चर्चित अभिनेतृ दीपिका पादुकोण सोमबार न्यूयोर्कमा भएको फेशनको प्रतिष्ठित इभेन्ट ‘मिट गाला २०१८’मा झुल्किइन्। रेड कार्पेटमा उत्रँदा ‘बाजिरावो मस्तानी’ को ड्रेसको डिजाइन नेपाली मूलका प्रबल गुरुङ रहेका थिए। हलिउडका मै हुँ भन्ने कलाकार तथा सेलिब्रेटीहरुसँगै स्टेज सेयर गरेकी दिपिकाले रातो गाउन लगाएकी थिइन्।आकर्षणको केन्द्र बनेकी सबैकाआँखा उनमै थिए।रातो हिल, रातो लिपिष्टिकसँगै हिराको गहनामा सजिएर र्‍याम्पमा उत्रँदा उनले वाहवाही मात्र बटुलिनन्, डिजाइनर प्रबलको पनि खुबै तारिफ भयो। ‘हेभेन्ली बडिज : फेसन एण्ड क्याथोलिक इम्याजिनेसन’ थिममा भएको फेसन सोमा दिपिकासँगै बलिउडकी अर्की नायिका प्रियङ्का
बलिउड अभिनेत्री करिश्मा कपुर सोमबार नेपाल आएकी छन् । उनले दरबारमार्गमा रहेको मेरिगोल्ड (सयपत्री) ज्वेलर्सको नयाँ शोरुम उद्घाटन गरिन् । बिहान साढे १० बजे उद्घाटन कार्यक्रममा राखिएको थियो । तर, करिश्मा २ घन्टा ढिलो आइन् । जबकि बिहान साढे ८ बजे नै उनी एयरपोर्ट उत्रिसकेकी थिइन् । उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणालाई पनि निम्त्याइएको थियो । एउटा सामान्य कार्यक्रमका लागि महंगो रकम खर्चेर भारतीय नायिकालाई झिकाउनुको आशय भने प्रष्ट भएको छैन । त्यसमाथि करिश्मा अहिले बलिउडबाट हराइसकेकी नायिका हुन् ।
प्रकाशित मितिः बैशाख २४, २०७५
अहिले बलिउड बजारमा अभिनेत्री सोनम कपूरको विवाह बारे खूब चर्चा चलिरहेको छ। सोनमले मे ८ मा आनन्द आहुजासँग विवाह गर्न लागेकी हुन्।अहिले कपुर निवासमा अतिथिहरुको चहलपहल सुरु भइसकेको छ। निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर सोनमको विवाहको लागि निकै नै उत्साहित देखिन्छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विवाहका लागि नृत्य अभ्यास गरिरहेको भिडियो पनि सेयर गरिसकेका छन्। समाचारका अनुसार करण जोहरले सोनमलाई सुन्दर उपहार दिने तयारीमा छन्। करणले सोनमलाई साडी, गहना तथा मिठाई उपहार दिने भएका छन्। उनले कान्जिवराम साडी, अमरापाली झुम्का, चाँदीको कंगन अनि इयररिङसहरु दिन लागेका हुन् । त्यसका साथै उनले मोतिचुरको लड्डुहरु
दीपिकालाई पूर्वप्रेमीको ट्याटुले सतायो !
दीपिका पादुकोण चर्चित भारतीय अभिनेत्री हुन् । कहिलेकाहीँ यस्तो कुराले समस्यामा पार्छ । दीपिकाको व्यायाम गर्दै गरेको फोटो अहिले भाइरल बनेको छ । तर, चर्चा उनको फिट शरीरभन्दा पनि त्यसमा खोपिएको पूर्वप्रेमीको ट्याटुलाई लिएर छ । दीपिकाको ट्याटुमा ‘आरके’ लेखिएको छ । स्रोतका अनुसार उनले यो ट्याटु रणवीर कपुरसँग प्रेम सम्बन्धमा रहँदा बनाएकी थिइन् । रणवीरसँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भएको ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । केही समयपहिले दीपिकाले सर्जरी गरेर ट्याटु हटाएको समाचार पनि आएको थियो । तर, यो सबै हल्ला थियो । दीपिका अहिले रणवीर सिंहसँगको गहिरो प्रेममा छिन् । उनीहरूले यसै वर्ष बिहे गर्ने योजना बनाएका
प्रकाशित मितिः बैशाख २२, २०७५
मोडलबाट नन बनेकी सोफिया हयात विवाहको एक वर्षपछि श्रीमानसँग अलग्गिएकी छिन् । उनले इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो पोष्ट गरेकी छिन् जसमा उनी क्वाँक्वाँ रोइरहेको देखिन्छिन् । श्रीमानको धोकाले सोफिया निकै दुःखी भएको देखिन्छिन् । उनले श्रीमानलाई धोका दिएको भन्दै घरबाट निकालेकी छिन् । सोफियाले श्रीमानमाथि इन्गेजमेन्टको औंठी र घडी बेचेको आरोप लगाएकी छिन् । सोफियाले रुँदै ब्रेकअपसँग डील गर्न निकै गाह्रो भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘एउटै समयमा श्रीमान र बच्चा गुमाउनु ठूलो पीडा हो । मैले यो कुरा सार्वजनिक गर्नुको कारण यो हो कि म उसलाई पाठ पढाउन चाहन्छु । यी सबै कुरा सहन निकै गाह्रो भइरहेको छ । केही चमत्क
बलिउड अभिनेत्री नरगिस फाखरी अभिनयभन्दा अफेयरका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । इम्तिजाय अलीको ‘रक स्टार’ फिल्मबाट बलिउडमा देखिएकी उनको हातमा पछिल्लो समय फिल्म परेको छैन । तर, वेला–वेलामा प्रेमी फेर्ने गरेको खबरले भने उनले चर्चा पाउने गरेकी छिन् । भारतीय अनलाइन मिडियाका अनुसार नरगिसले हालै सोसियल मिडियामा ट्याटुयुक्त एउटा तस्बिर पोस्ट गरिन् । जसमा उनले आफू र प्रेमी म्याटको नामको पहिलो अक्षर खोपाएको प्रस्ट देखिन्छ । गत क्रिसमसमा नरगिसले हलिउड संगीतकार, निर्माता म्याट एलोनजोसँग इन्स्ट्राग्राममा फोटा सेयर गरेकी थिइन् । त्यसबाट उनले नयाँ प्रेमी भेटेको अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले आएर घुमाउरो पाराले उन
मनिषा कोईराला भारतको प्रतिष्ठीत चलचित्र पुरस्कारबाट सम्मानित
अभिनेत्री मनिषा कोईराला भारतको प्रतिष्ठीत चलचित्र पुरस्कार “दादा साहेब फाल्के अवार्ड २०१८” बाट सम्मानित भएकी छिन् ।मनिषा कोइरालाले भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा दिएको योगदानको कदरस्वरुप उनलाई मस्ट भर्सटाइल एक्ट्रेस विधामा उक्त पुरस्कार दिइएको हो। भारतीय सिनेमा क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वलाई दिइने दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारत सरकारले वार्षिक रुपमा दिने प्रतिष्ठित पुरस्कारमध्ये पर्छ। मुम्बईमा आइतबार राति आयोजित कार्यक्रममा अवार्ड वितरण गरिएको थियो । अवार्ड लिएपछि अभिनेत्री मनिषाले आफू गौरवान्वित भएको बताएकी छिन् । एजेन्सी